၎င်းတို့သည် Samsung Galaxy Note 8 ၏နောက်ဆုံးသတ်မှတ်ချက်များဖြစ်သည် Androidsis
Samsung ကသူ့ရဲ့ Galaxy Note 8 phablet အသစ်ကိုစီစဉ်မယ့်ပွဲမှာကြေငြာမယ်လို့သိရပါတယ် နယူးယောက်၌လာမယ့်သြဂုတ်လ 23ကုမ္ပဏီ၏စွမ်းဆောင်ချက်အသစ်နှင့်ပတ်သက်ပြီးပေါက်ကြားမှုများကြားမှယခုနောက်ဆုံးတွင်တစ်စုံတစ်ယောက်သည်စက်၏နောက်ဆုံးနည်းပညာဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များပေါက်ကြားခဲ့သည်။
အထူးသဖြင့်လူသိများသော leaker Evan Blass (သူ၏ Twitter အကောင့်အတွက်လူသိများသည်) @evleaks), ၎င်း၏တရားဝင်ဖြန့်ချိမတိုင်မီ Note 8 ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအပြည့်အဝယိုစိမ့်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။
Galaxy Note 8 ၏နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ
ပထမ ဦး ဆုံးအနေနဲ့ Galaxy Note 8 ဟာ Device တစ်ခုအနေနဲ့ကျန်တော့မှာပါ IP68 လက်မှတ် ယခုနှစ်အစောပိုင်းကမိတ်ဆက်ခဲ့သော Galaxy S8 အကွာအဝေးရှိစမတ်ဖုန်းများနှင့်အတူတူ (ရေနှင့်ဖုန်မှုန့်များမှကာကွယ်မှု)
အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ Note 8 တွင်aရှိသည် ၆.၃ လက်မ SuperAMOLED မျက်နှာပြင် သောကြောင့်ထက်အနည်းငယ်ပိုကြီးစေသည် က Galaxy S8 +။ ဤအတောအတွင်းစက်၏ထောင့်များသည်အနည်းငယ်စတုရန်းပေလိမ့်မည် 2.960 x 1.440 pixel resolutionတစ် ဦး မှ ဦး ဆောင် ၁၈: ၉ အချိုး။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်း၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတိုင်းအတာအရ Note 8 သည်တိုင်းတာလိမ့်မည် 162.5mm x ကို 74.6mmag နှင့်အတူ8.5mm အထူ.
ဒါ့အပြင် Galaxy Note 8 အသစ်မှာ processor နဲ့ပါလာမယ် Exynos 8895 Snapdragon 835 CPU ဖြင့်ရောင်းချမည့်ယူနိုက်တက်စတိတ် မှလွဲ၍ ကမ္ဘာအနှံ့ရှိ Samsung မှတစ်ကမ္ဘာလုံးမှလာသည်။ RAM 6GB နှင့်ဒေတာသိုလှောင်ရန်နေရာ ၆၄ ဂရမ်.
ထို့အပြင် device ကိုရပါလိမ့်မယ် နောက်ကင်မရာနှစ်ခု အာရုံခံကိရိယာနှင့်အတူ ဖြစ်ရပ်နှစ်ခုလုံးတွင် 12 megapixels ရှိသည်. အဓိကမှန်ဘီလူးသည် F / 1.7 aperture နှင့် Dual-Pixel autofocus စနစ်ဖြင့်ကျယ်ပြန့်သောထောင့်ဖြစ်လိမ့်မည်telephoto မှန်ဘီလူးတွင်f/ 2.4 aperture နှင့် 2x optical zoom ရှိလိမ့်မည်။ မှန်ဘီလူးနှစ်ခုလုံးတွင် optical image stabilization system ရှိသည်။ နောက်ဆုံးတွင်ရှေ့ကင်မရာတွင်အာရုံခံကိရိယာတပ်ဆင်ထားသည် 8 megapixels autofocus စနစ်နှင့်f/ 1.7 ကို aperture နှင့်အတူ။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ Galaxy Note 8 မှာaတစ်ခုထားရှိမည် 3000mAh ဘက်ထရီ သော USB Type-C port မှတဆင့်အားသွင်းပါလိမ့်မည်။
ဥရောပမှာတော့ Phablet ကဈေးသက်သာတယ် 1000 ယူရို လာမယ့်စက်တင်ဘာလတွင်စီးပွားဖြစ်စတင်သောအခါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Samsung » ၎င်းသည် Samsung Galaxy Note 8 ၏နောက်ဆုံးသတ်မှတ်ချက်များဖြစ်သည်
LEAGOO KIICAA MIX ကိုဘွတ်ကင်လုပ်ပြီးလက်ဆောင်များအပြင်စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသောအထူးလျှော့စျေးကိုရယူပါ